Semalt: Nzira Yokudzivirira Sei Mawebhusayithi Akawanda MuChrome Using BlockIt
Indaneti yakazadzwa nekudengenyeka, uye kuparidzirwa kwep-up kune zvimwe zvezvinhu zvinotyisa. Izvi zvinowanikwa pamapeji ako ewebhu uye zvinokanganisa vashandi nenzira dzakawanda. Uyezve, vanofambisa vashandisi kune mawebsite asina kufanira kana evanhu vakuru - logo instagram vectoriel. Ne BlockIt, iwe unogona kukurumidza kubvisa zvose zvikwata zvep-up uye masikiti anonyunyuta kana vanhu vakuru kubva kuGoogle Chrome. Mawebhusayithi anotakura uye kutora magwaro iwe waunopinda nawo anogona kudziviswa nyore nyore neyiyi nzira.
Pane zvinopesana zvakasiyana paIndaneti, uye isu nguva dzose tinotsvaka kudzivirirwa kwavari. Vabereki vanoda mapurogiramu akavimbika ekuberekwa kwevabereki akaiswa pamafoni emafoni evana vavo kuti vadzivise matambudziko asina kufadza, uye vashandi vanotarisa zvidzidzo zvakajeka zvekuongorora kushanda kwakanaka kwevashandi vavo. Kune vashandisi veGoogle Chrome, mhinduro yezvinetso zvose iripo, inozivikanwa seBlobkIt. Ndiyo yakakurumbira browser browser extension iyo inogona kudzivirira kusvika kune mapeji mashomanana kuitira kuti zvisizvo zvisina kunaka uye zvinotadza zvioneke paunenge uchifambira paIndaneti.
Pano Michael Brown, mutungamiri wekutungamirira kubva ku Semalt , akarondedzera dzimwe nzira dzekuvhara mawebhusayithi akawanda mu Chrome achishandisa BlockIt.
Sarudzo # 1:
Kana uri kushandisa Windows version, iyo isingatsigiri kuvabereki, iwe unogona nyore nyore kuisa shanduro inozivikanwa seBlockIt kubvisa zvimwe zvingangodaro kana kuti mawebhusayithi evanhu vakuru. add-on and type chrome: // extension / in your bar bar.Ichicharatidza zvese zvakanyanyiswa zvakaitwa.Ichipiri chechipiri ndechekusarudza pane Options bar uye kurega kuwanikwa kumapeji asina kufarira.)
Sarudzo # 2:
Kunyange zvazvo zviri nyore kwazvo kudzivirira mawebsite mashomanana ane nzira iyi, unogona nyore nyore kusvitsa nzvimbo dzako dzinofarira kubva kune rimwechete. Enda kune Chikamu Chatsanangudzo uye bvisa URL kuti uibvise kubva pakurongwa. Iva nechokwadi chekuti wakaponesa zvigadziriro usati wavhara vheji dzako dzewebhu.
Sarudzo # 3:
Kana iwe uchida kuisa password kuitira kuti vana vako vasasvike mawebsite akavharidzirwa nguva dzose, unofanira kuisa mukati mephasiwedi mubhuku reBlockIt's and confirm it. Zvadaro iwe unofanira kuvhara pane Bhokisi reKachengetedza usati wapedza zindo.
Sarudzo # 4:
Zvino, dzokera kuGoogle Chrome kuti uone kana URL dzakanyatsodziviswa kana kwete. Iwe unongoda kuisa zita renzvimbo yacho, uye kana yakavharwa, shoko richaonekwa richireva kuti iyi webhusaiti yakavharwa. Kana iwe uchida kusvika kune imwe webhusaiti, unofanira kufanidza paIndaneti Zvisarudzo uye shandisa password yako pano. Ichakutungamirira kune peji apo iwe unokwanisa kudzivisa kana kuvhara mawebhusayithi maererano nemafungiro ako.
BvisaIve yave yakapoteredza kwemakore, asi nhamba yakawanda yewebsite inodzivirira haina kuenzaniswa paIndaneti. Chinhu chakanaka ndechokuti izvi zvinogona kuvhara mawebhusayithi akawanda muGoogle Chrome uye hazvichengetedzi hukama hwavo mu-backend. Uyezve, unogona kuvhura mapeji ewebhu chero nguva, chero kupi zvako.